I-Ovida isambrela somfazi kunye noyilo olukhethekileyo lwe-ambulensi yesimo somlandeli
Into NO.: I-OV10021
I-Ovida isambrela somfazi kunye noyilo olukhethekileyo lomlandeli wehotele isambrela semilo
Iiphaneli ezinemibhobho emfusa, yenza isambrela sibonakale ngathi sisambrela se-lutos sambrela
Isakhiwo se-fiberglass sokungena ngumoya esizenzekelayo, isambrela esingangeni manzi kwizambrela.
DB Isikhumba isibambo ezimilise-J, kulula ukuphatha kunye hang-on isipili yokubamba ukhetho.
Isakhelo esomeleleyo se-ULTRA: Uninzi lwezinto zesakhelo zisebenzisa izixhobo zentsimbi kuphela, le iimbambo zeambrela ezine-fiberglass eguqukayo, ke yomelele kunesinyithi esinye.
UMGANGATHO OBALULEKILEYO WELIDANGI LELIBANGO: Ilaphu lixinzelelekile ekugxotheni amanzi kwaye lome ngokukhawuleza, alizukufunxa amanzi. Vuthulula nje kamnandi emva kokuvala isambrela, emva koko onke amathontsi aya kuwa ngokulula. Ilaphu elipheleleyo logo yoshicilelo lenjongo, oko izambulela wena.
I-CLASSIC KUNYE NOYILO OLUFANELEKILEYO: Uyilo olude olumiliselwe i-J lulunge ngokugqibeleleyo ezandleni zakho kwaye kulula ukuluqhuba. Xa ingasetyenziswanga, isingxobo sePongee esilinganayo sivalela isambrela ukugcina isambulela sihle kwaye sicocekile
Egqithileyo I-Ovida isiko elipheleleyo lombala osetiweyo-iseti yeambrela yokuprinta iambrela
Okulandelayo: I-Ovida isakhelo sesambulela i-skyblue ipromo yeprimiyamu eyaziwayo isambulela esithandwayo kwi-7k isambrela
Isambrela esenzelwe wena, Isambrela esisesikweni, Iisambrela zesiko lesiqhelo, Isambrela soKhuseleko oluNgenawo umoya, Ukusongelwa kwangaphandle, Umbrella wemvula,